नेपाली फिल्ममाथिको सौतेनी व्यवहार - ABNews Nepal
Apr 12, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, kapurbot tv, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
सामाजिक संजालमा फिल्मीकर्मीहरुले एउटा तस्वीर शेयर गरिरहेका छन् । जहाँ, भारतीय फिल्म ‘केजीएफ २’ र नेपाली फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’को पोष्टर देख्न सकिन्छ । ‘केजीएफ २’को भव्य पोष्टर टाँसिएको छ । सोही पोष्टर मुनी सानो आकारको २ वटा पोष्टर ‘ए मेरो हजुर ४’को पनि झुन्डाइएको छ । यही तस्वीरले बोल्छ, नेपाली फिल्मलाई विदेशी फिल्मले कसरी हेपिरहेका छन् र सोही हेपाईमा सारथी कसरी नेपाली प्रदर्शक र वितरकहरु नै बनिरहेका छन् । इन्द्रदेव हलले ‘ए मेरो हजुर ३’ चलाएर राम्रो रकम कमाएको थियो । तर, विदेशी ठुलो फिल्म पाएपछि नेपाली फिल्ममाथि
गरिने सौतेनी व्यवहार हलको एउटा पोष्टरबाट झल्किन्छ ।‘ए मेरो हजुर ४’को पोष्टर पनि राखिदिउन भन्ने सोचले पोष्टर राखेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाली फिल्मले नेपालमै यति ठूलो अपमान सहनुपर्छ भने निर्माताले फिल्म किन बनाउने ?विदेशी फिल्म भन्ने वित्तिकै आँखा चिप्लिएर विश्वास गर्ने दर्शक, नेपाली फिल्म भन्ने वित्तिकै उत्कृष्टलाई पनि नाक खुम्चाउने सोच, अरुको फिल्म नचल्दा खुशी हुने फिल्मीकर्मी, नेपाली भन्दा विदेशी फिल्ममाथि भरोसा गरेर करोडौ रकम खर्च गर्ने वितरक, नेपाली फिल्मलाई पाखा लगाउँदै हेपाहा प्रवृत्ती राख्ने प्रदर्शककै कारण नेपाली निर्माताले दिल खोलेर लगानी गर्न सकेका
छैनन् ।‘केजीएफ २’लाई मल्टिप्लेक्समा उच्च शो दिएर नेपाली फिल्मलाई झारा टार्ने शोज दिएका छन्, प्रदर्शकले । यस्तो हेपाहा प्रवृत्तीले नेपाली फिल्मका निर्माताले करोडौ लगानी गर्ने सोच आगामी दिनमा पनि राख्न सक्लान् त ? अनमोल केसी जस्ता स्टार, झरना थापा जस्ती चलेकी नायिकाको फिल्म, सुनिल कुमार थापा जस्ता चर्चित निर्माताको फिल्म त यस्तो हालत हुन्छ भने नयाँ निर्माताले फिल्म किन र केका लागि बनाउने ? अब एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएन र ?